Mitady tolotra tetikasa madinidinika tsara tohanana indray ny rising voices · Global Voices teny Malagasy
Mitady tolotra tetikasa madinidinika tsara tohanana indray ny rising voices
Voadika ny 02 Novambra 2007 15:17 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Português, Español, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Ny 30 novambra 2007 no andraisana ny tolotra farany.
Manaiky ny handray ireo tolotra tetikasa (avy amin’olo-tsotra) mety hahazo vatsy hatramin’ny $5.000 indray ny Rising Voices, rantsa-mangaikan’ny Global Voices aty amin’ny firenena ankoatra ny tany mandroso. Izay te-handray anjara amin’izany dia handahatra amin’ny antsipirihany sy amin’ny endrika vaovao ny fomba ampianarana fokonolona (na vondron’olona araka izay mety hahazoanao ny teny anglisy) tsy mba manana vintana loatra hahare ny momba ny fampitam-baovaon’ny olom-pirenena. Mba hahita, hahafantatra ary ho tia sy hahay hampiasa ny fitaovana handrotsahana sy hampidirana bolongana (blaogy) ireo vondron’olona ireo ka ho hainy ihany koa ny fampidirana bolongan-tsarimihetsika sy ny bolongam-peo araka izay tiany.
Efa nanangana tetikasa dimy tamin’ny tolotra 142 azonay avy amin’ny firenena mihoatra ny 60 izahay tamin’ny volana jolay. Ny dimy voalohany nahazo vatsy avy tamin’ny Rising Voices dia avy tany Bangladesh, Colombia, Bolivia, India, ary Sierra Leone. Afaka mijery ny tolotr’ireo nahazo vatsy ireo ianao amin’ny alalan’ny fanindriana (clicking) ny rohy mibaribary ambanin’ny lohateny madinika “Grantees” eo amin’ny tsipisarin’asan’ny (sidebar) Rising Voices wiki.
Ny tanjon’ny Rising Voices dia ny hitondra feo vaovao avy amin’ny vondron’olona vaovao sy hitondra teny vaovao ao amin’ny tontolon’ny web be resaka, amin’ny alalan’ny fanomezana tahirin-kevitra sy fananganana vondrona ao an-toerana ka mipaka any amin’ny fokonolona tsy henoheno tafa. Ny tetikasa mety ho avy amin’izany dia tokony hahitana:
• Fandresen-dahatra ireny mpanoratsoratra na mpanao sarisary amin’ny rindrina ireny hamindra ny fanehoan-keviny avy eny amin’ny rindrin-drano na tamboho ho any amin’ny bolongan-tsoratra (blaogy), bolongam-peo (podcast) ary bolongantsarimihetsika.
• Manatona fikambanana tsy miankina eo an-toerana hanazatra ireo mpikambana ao aminy hampiditra bolongana sy handefa rakitsary mba hananan’ilay fikambanana tsy miankina sy ny fokonolona eo amin’ny manodidina azy tahirin-kevitra.
• Fizarana fakantsary raitra mitentina $10 amina vondron’olona roa samihafa anatin’ny fokonolona iray ary manangana vondrona mpampidi-tsary Flickr hifampizaran’izy ireo (na ifaninanan’izy ireo) ny sarin’ny tanànany sy ny ho aviny.
• Fizarana fandraisam-peo mp3 amina vondrona tanora sy hanampy azy ireo hamokatra tahirimpeo mandrakitra ny tenin’ny zokiolona (na zoky ara-taona fotsiny izao) izay mamelabelatra sy mitantara amin’izy ireo ny fiova sy ny fivoaran’ny tanàna nandritra ny ampolony taona maro.
Misy lafiny iray lehibe mampiavaka ity fanomezambatsy faharoa ity tamin’ny natao voalohany. Afaka misafidy ny handefasanao ny tolotra ataonao na alefanao amin’ny alalan’ny mailaka na asehonao amin’ny be sy ny maro amin’ny alalan’ny wiki sady mety mahazo ny setriny amin’ny hanatsarana azy. Ny tolotra aseho vahoaka dia azo apetraka ao amin’ny wiki amin’ny fotoana rehetra sady azo hatsaraina mandrakariva araka izay itiavana azy, fa tsy maintsy vita alohan’ny 30 novambra ho avy izao izany (tsy haiko izaho mpandika ho teny Malagasy koa moa hoe ora inona no iafarany).
Manomboka amin’ny $1,000 ka hatramin’ny $5,000 ny vatsy omen’ny Rising Voices outreach (izay mendrika ao amin’ny “fifaninanana” amin’ity indray mitoraka ity. Enga anie ianao (ianareo) hamaritra tsara, hahay handinika, ho vita adisanina, ho maty paika ary ho azo tanterahina tokoa ny teti-bola eo amin’ny fandrafetana ny tetikasa. Ho talaky maso ao amin’ny Global Voices ny tetikasa mahomby rehetra.
Raha tianareo ho hay ny fampiasana ny wiki amin’ny fametrahana ny tetikasa dia jereo eo ambanin’ny bolongana amin’ny teny anglisy (tsindrio ny rohy eo amin’ny original post) fa misy sary fanazavazavana izany na tsidiho pejy fanorotoroana ny tokony atao ao amin’ny wiki. Raha tianareo alefa tsy aseho vahoaka moa ny tolotra ataonareo dia sintonina an-tserasera(vakio ny download misy format roa ao amin'ny teny anglisy) ny taratasy fenoina ka rehefa feno sy mahafapo anao dia alefaso amin’ity adiresy ity ny tolotrao outreach@globalvoicesonline.org alohan’ny 30 Novambra ho avy izao. Tsy ho azo raisina sy hodinihana intsony izao tolotra tratra aorian’ny fotoana farany voasoratra.